IsiSeko soMvuzo | Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi | Ukuyeka u-porn
Zonke iiBlog ezivela kwiSiseko soMvuzo
No. 15 Usuku lweValentine ngo-2022
I-14 Autumn 2021
Uhlobo olukhethekileyo ngoMeyi 2021
I-TRF kwi-Press 2022
I-TRF kwi-Press 2021
Uncedo malunga nokulutha kwe-intanethi ye-porn / ukusetyenziswa okuyingxaki
Ividiyo yoQinisekiso lobudala
Ingqungquthela yokuQiniseka kweMinyaka ka-2020 yezixhobo
ISikhokelo Sabazali Abangendawo kwiphonografi ye-Intanethi.
22nd Meyi 2022
12 Iingcebiso kubazali ukuba bathethe nabantwana malunga nephonografi
6I Epreli 2022
14hi ngoFebruwari 2022
1st Januwari 2022
UBillie Eilish unika iShishini lamanyala ngeliso elimnyama
16I Disemba 2021
USimon Bailey: iphonografi iqhuba ubundlobongela obujoliswe kwabasetyhini kunye namantombazana
15I Disemba 2021
Udlwengulo kunye ne-Porn
26I ngoNovemba 2021
25ti ngo-Oktobha 2021
Cofa apha kwiiNdaba zeBlog
Isiseko soMvuzo ubudlelwane bobuvulindlela kunye nesisa sokufundisa ngesondo. Igama livela kwinto yokuba inkqubo yemivuzo yengqondo inoxanduva lokuqhuba ukuthanda kunye nokwabelana ngesondo kunye neminye imivuzo yendalo njengokutya, into entsha kunye nokufikelela. Inkqubo yomvuzo inokuxhwilwa yimivuzo eyomeleleyo efana neziyobisi, utywala, inicotine kunye ne-intanethi.
Isiseko soMvuzo ngumthombo ophambili wolwazi olusekwe kubungqina malunga nobudlelwane bothando kunye nefuthe le-intanethi ye-intanethi kwimpilo yengqondo nangokwasemzimbeni, ubudlelwane, ukufikelela kunye noxanduva olusemthethweni.
Ikholeji yaseRoyal yamaGcisa Jikelele iyamkele indibano yethu yoqeqesho kukhathalelo lwempilo kunye nezinye iingcali malunga nefuthe le-intanethi kwi-intanethi ngengqondo kwaye impilo yomzimba, kubandakanya ukungasebenzi kakuhle ngokwesondo. Ukuxhasa oku, senza uphando ngothando, isondo kunye ne-intanethi kwi-intanethi ifikeleleke kuluntu ngokubanzi. Bona yethu yasimahla izicwangciso zesifundo yezikolo ngoku ziyafumaneka zombini kule webhusayithi nakwi- Ixesha lewebhusayithi yokuXhasa iMfundo, nayo simahla. Bona nathi Isikhokelo sabazali kwiphonografi ye-Intanethi. Kuphantse kube nzima ukuthetha ngothando kunye nobudlelwane bezesondo namhlanje ngaphandle kokuvuma indima ye-intanethi ye-intanethi. Ifuthe kulindelo kunye nokuziphatha, ngakumbi kulutsha.
Research yiBritish Board yeFilash Classical ifumene ukuba e-UK i-1.4 yezigidi zabantwana ngenyanga babukele iphonografi. Iminyaka elishumi elinesine okanye engaphantsi yayiyiminyaka engama-60 pesenti yabantwana ababona okokuqala kwi-Intanethi. Uninzi, ipesenti ezingama-62, bathi bakhubeka ngengozi kuyo kwaye bengalindelanga ukubona iphonografi. Uninzi lwabazali, iipesenti ezingama-83, bangathanda ukubona ukungqinisisa kobudala kwaziswa kwezi ndawo zinobungozi. Kwaye iipesenti ezingama-56 zabantwana abaneminyaka eli-11 ukuya kweli-13 ubudala bangathanda ukukhuselwa kwizinto ezingaphezulu kwe-18's ezikwi-intanethi.
Sincoma le 2-ngomzuzu oopopayi njenge-primer. Ukufumana inkcazo elungileyo yeziphumo ze-porn kwingqondo, jonga oku 5 umzuzu okhutshiweyo isuka kuxwebhu lweTV. Inika i-neurosurgeon, uphando oluvela kwiDyunivesithi yaseCambridge kunye namava abanye abasebenzisi abancinci.
Nazi ezinye ezilula ukuzihlalutya ngokwakho Ukuzivocavoca okwenziwe ngoochwephesha bezonyango kunye neeklinikhi ukubona ukuba i-porn ichaphazela wena okanye umntu osondeleyo kuwe.
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi ayifani ne-porn yexesha elidlulileyo. Kukhuthazo 'oluqhelekileyo'. Inokuba nefuthe kwingqondo ngendlela efanayo kwi-cocaine okanye i-heroin xa ibanjwe rhoqo. Imifanekiso engamanyala ayilunganga ngakumbi kubantwana abenza i-20-30% yabasebenzisi kwiindawo zabantu abadala. Oku kuphela kuthethelela urhulumente wase-UK wokuqinisekisa iminyaka yokuthintela ukufikelela ebantwaneni nokukhusela impilo yabo.
Abantwana abaneminyaka esixhenxe ubudala bavezwa imifanekiso engamanyala enesondo ngenxa yokungafumani iitshekhi zobudala ezisebenzayo ngoku uphando eyalelwa yi Bhodi yeBritish yoHlulelo lweMiboniso bhanyabhanya. Imifanekiso engamanyala yenzelwa inzuzo, ishishini lezigidi zeedola. Ayenzelwanga ukufundisa abantwana ngesondo kunye nobudlelwane.
Elona Lingelikhulu leLingelo loLuntu elingabhaliswanga
Akuzange ngaphambili kwimbali ibe nezinto ezininzi ezikhuthaza ukonyanzelwa ngokwesini ukuba ifumaneke ngokukhululekileyo ngoku. Lelona linge likhulu, elingalawulwayo kwezentlalo kwimbali yoluntu. Kwixesha elidlulileyo i-hardcore pornography kwakunzima ukufikelela kuyo. Ivela ikakhulu kwiivenkile zabantu abadala ezinelayisensi ethintela ukungena nakubani na ongaphantsi kweminyaka eyi-18. Namhlanje, uninzi lwamanyala lufikeleleka simahla ngee-smartphones kunye neepilisi. Ukuqinisekisa ubudala obusebenzayo beendwendwe abukho. Ukusetyenziswa gwenxa kuvelisa uthotho oluninzi of ngengqondo kwaye ngokomzimba Imicimbi yezempilo enje ngoxinzelelo lwasentlalweni, uxinzelelo, ukungasebenzi ngokwesondo kunye nokulutha ukubiza ezimbalwa. Oku kuyenzeka kuwo onke amaqela eminyaka.
Uphando lubonisa ukuba ukuzinkcinkca kwi-intanethi kunokunciphisa umdla, kunye nolwaneliseko oluvela kubomi bokwenene bobudlelwane bezesondo. Ukwanda kwamanani abantu abancinci ukuya kubudala obuphakathi abakwazi ukwenza ngokwesondo kunye namaqabane abo. Abantu abancinci baya beba ndlongondlongo kwaye benogonyamelo ekuziphatheni kwabo ngokwesondo.
Injongo yethu kukunceda abantu abadala kunye nabaqeqeshiweyo bafikelele kubungqina abadingayo ukuze bazive benokuqiniseka ukuba bathathe amanyathelo afanelekileyo okunceda abaguli babo, abathengi kunye nabantwana babo. Okwethutyana ukuphelisa i-masturbation, okanye ukunciphisa ixesha eliqhelekileyo, konke malunga nokufumana iziyobisi kunye neengxaki zesondo ezibangelwa ziintlobano zesini- ayikho enye into. ISiseko soMvuzo asikukhuthazi ukurhoxa njengendlela yokuphila isigxina.
'Amandla oShishino' kwi-Intanethi
Ukunikezela nge-porn kunokuba nefuthe elibi kwimpilo yezesondo, imeko yengqondo, indlela yokuziphatha, ubudlelwane, ukufikelela, ukuvelisa kunye nolwaphulo mthetho. Ngalo lonke ixesha umsebenzisi esaqhubeka nokuloba, iingqondo zitshintsha ngakumbi kwaye kube nzima ukubuyela umva. Ukusetyenziswa kwamaxesha athile akunakwenzeka ukuba kunokubangela ukulimala okungapheliyo. Ukulungisa utshintsho olusebenzayo kwengqondo sele zibhalwe nokusebenzisa nje iiyure ezi-3 zamanyala ngeveki.
Iingqondo zethu azikhathalelwanga ukuba zijamelane noxinzelelo lwe hyper. Abantwana basengozini enkulu yokuhanjiswa simahla, ukusasazwa kwe-intanethi yesondo. Oku kungenxa yempembelelo yazo enamandla kubuchwephesha babo obuthathaka kwinqanaba eliphambili lokuphuhliswa kwesini kunye nokufunda.
Uninzi lweefilimu ezingamanyala ezenziwa kwi-Intanethi namhlanje azilubonisi ulwalamano olusondeleyo kunye nokuthembana, kodwa ngokwesondo olungakhuselekanga, ukunyanzela kunye nobundlobongela, ngakumbi kubantu basetyhini nakwizinto ezincinci zobuzwe. Abantwana bahlengahlengisa iingqondo zabo ukuba badinga ukungafumani nto kwaye amanqanaba aphezulu okuqalwa okungumtshato angalinganiyo namaqabane obomi bokwenyani. Iyabaqeqesha nabo ukuba babe zii-voyeurs.
Kwangelo xesha abaninzi baziva bengonelanga ngokwesini kwaye bayasilela ukufunda izakhono zokuzibandakanya ukuze bahlakulele ubudlelwane obusempilweni, nobusenyameni ixesha elide. Oku kukhokelela kwisizungu, ixhala kwintlalo kunye noxinzelelo ngokwanda.
Uninzi lwabantu abancinci okokuqala ukubukela iphonografi ngengozi, ngaphezulu kwe-60% yabantwana i-11-13 ababone iphonografi besithi ukubukela kwabo iphonografi akunanjongo ngokwangoku uphando. Abantwana bachaze ukuba baziva ngathi "baphelelwe lixesha" kwaye "badidekile". Oku kusetyenziswe ngokukodwa xa bebona iphonografi phantsi kweminyaka eyi-10.
Oku kunokuba yinto yokumangalisa kubazali abaninzi. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi, bona bethu Isikhokelo sabazali kwi-Intanethi ye-Intanethi . Ijolise ekuncedeni ukuxhobisa abazali kunye nabanakekeli kwezo ngxoxo zinzima nabantwana bakho kunye nokulungelelanisa inkxaso nezikolo ukuba ziyafuneka. Amapolisa eKent Lumkisa ukuba abazali bangatshutshiswa ngenxa 'yokuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni' yabantwana babo ukuba banoxanduva lwesivumelwano sefowuni. Bona iphepha lethu malunga ukuthumelelana imiyalezo nemiyalezo ethunyelwa nge-Intanethi kunye nomthetho eScotland Kwaye kuthunyelwe imiyalezo nge-Intanethi INgilane, Wales kunye ne-Northern Ireland.
Sisandula ukwazisa uthotho lweMAHHALA izicwangciso zesifundo Ootitshala abaya kujongana "neNtshayelelo yokuthumela imiyalezo ngefowuni"; "Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni kunye noBongo boButsha" "Ukuthumela imiyalezo ngefowuni, uMthetho kunye nawe"; "Iphonografi xa kuvavanywa"; "Uthando, isondo & Iphonografi"; "Iphonografi kunye neMpilo yeNgqondo", kunye "novavanyo olukhulu lwe-porn". Ziquka iindlela zokutyebisa, ukuzonwabisa kunye nokunxibelelana kunye nezixhobo ezibonelela ngendawo ekhuselekileyo yokuba abafundi baxoxe ngayo yonke le micimbi ibalulekileyo. Akukho tyala okanye hlazo, iinyani nje, ukuze abantu bakwazi ukwenza ukhetho olunolwazi.
Izifundo ezikhoyo ngoku zilungele nezikolo ezisekwe kwinkolo. Akukho manyala aboniswayo. Naluphi na ulwimi olunokuchasana nemfundiso yenkolo lunokuguqulwa.
UPhononongo lweSiseko soMvuzo
Isiseko soMvuzo sibeka esweni uphando olwenziwayo mihla le kwaye sidibanise uphuhliso lwezixhobo zethu. Sivelisa nophando lwethu, ngakumbi ncomo yophando lwamva nje ukuze abanye bahlale benolwazi ngezinto ezintsha.
Kukho ngoku izifundo ezintandathu bonisa u unxibelelwano lwe-causal phakathi kokusetyenziswa koononophelo kunye neziyobisi ezivela kuloo tyenziswa.
Kwisiseko somvuzo siyaxela amabali Ukusuka kumawaka amadoda kunye nabasetyhini abaye bavelisa ingxaki yokusebenzisa iphonografi kwi-intanethi. Olu phando lungekho sesikweni lubalulekile ekuthatheni ingqalelo iimeko zangoku ezinokuthatha ixesha elide ukuboniswa kuphando olusemthethweni. Uninzi luye lwazama ukuyeka i-porn kwaye bafumana izibonelelo ezahlukeneyo zengqondo nezomzimba ngenxa yoko. Bona le ncinaneibali.
Iinkampani zoonografi beziphambili kuphuhliso kunye noyilo lwe-intanethi. Ukugxininisa rhoqo kwi-intanethi kubangela ukuba ingqondo ivelise iminqweno enamandla ngakumbi. Le minqweno ichaphazela iingcinga kunye nokuziphatha komsebenzisi we-porn ngokuhamba kwexesha. Ukwanda kwamanani abasebenzisi oku kunokukhokelela ingxaki yokuziphatha ngokwesondo. Olu hlolisiso lutshanje luveliswe ngohlaziyo lweshumi elinanye loMbutho wezeMpilo weHlabathi woHlelo lweZifo (i-ICD-11) kubandakanya ukusetyenziswa gwenxa kwe-porn kunye nokuhambisa amalungu esini. Ngaphandle kolawulo lwe-porn kunye ne-masturbation inokuhlelwa njengengxaki yokulutha ngaphandle kokungaxelwanga usebenzisa i-ICD-11.
Ngokutsho uphando olutsha, ngaphezulu kwe-80% yabantu abafuna uncedo lonyango kwisinyanzeliso sokuziphatha ngokwesondo abanengxaki enxulumene nezesondo. Bukela oku kugqwesileyo Intetho yeTEDx (9 imiz) ukusukela nge-2020 kaJanuwari XNUMX yiYunivesithi yaseCambridge eqeqeshwe yi-neuroscientist uCasper Schmidt ukuze afunde malunga ne "Compulsive Sexual Behaeve Disorder"
Imifanekiso engamanyala namhlanje 'ngamandla emizi-mveliso' ngokobungakanani obukhoyo kunye namanqanaba okukhuthaza, xa kuthelekiswa nemifanekiso engamanyala ye10 okanye 15 kwiminyaka eyadlulayo. Ukusetyenziswa kwayo lukhetho lomntu, asizimiselanga kuthintela amanyala asemthethweni kubantu abadala, kodwa abantwana kufuneka bakhuselwe. Ukuphulula amalungu esini ngokugqithileyo kukhuthazwa yimifanekiso engamanyala kunokukhokelela kwimicimbi yezempilo yengqondo neyasemzimbeni kwabanye. Sifuna ukunceda abasebenzisi babenethuba lokwenza ukhetho 'olunolwazi' ngokusekwe kubungqina obubalaseleyo bophando olukhoyo ngoku kunye neendlela zokubuyisela umqondiso, ukuba ziyafuneka. Okwethutyana Ukuphelisa i-masturbation, okanye ukunciphisa i-frequency, konke malunga nokufumana iziyobisi, imeko yezesondo kwizinto ezinobunzima kunye neengxaki zesondo ezibangelwa zi-porn-akukho enye into. ISiseko soMvuzo asikukhuthazi ukurhoxa njengendlela yokuphila isigxina.
Sikhankasela ukunciphisa ukufikelela ngokulula kubantwana kwi-intanethi. Amashumi e uphando Amaphepha abonisa ukuba kuyabenzakalisa abantwana kwinqanaba labo elisemngciphekweni wokukhula kwengqondo. Kubekho ukonyuka okumangazayo kokuxhatshazwa ngokwesondo komntwana nomntwana kule minyaka ili-8 idlulileyo kunye nokwenzakala okunxulumene nezesondo ngokwesondo ngokweengcali zononophelo lwempilo eziye kwiindibano zethu zocweyo kwaye mhlawumbi ukufa. Inxulunyaniswa nobundlobongela basekhaya, obusenziwa ikakhulu ngamadoda ngokuchasene nabasetyhini.
Siyawaxhasa amanyathelo kaRhulumente wase-UK okunyanzelisa ukuqinisekiswa kobudala obusebenzayo kwiindawo zentengiso ye-porn kunye neendawo zosasazo zasekuhlaleni ukuze abantwana bangakhubeki kuyo ngokulula. Ayizukuthatha indawo yemfundo malunga nobungozi. Kwaye ngubani oxhamlayo xa singenzi nto? Umzi mveliso we-porn wezigidi ngezigidi. Urhulumente wase-UK uceba ukujongana ne-porn efumaneka kumajelo asekuhlaleni kwesi siphakamiso IPhepha eliMhlophe kwi-Online Harms. Akunakulindeleka ukuba ube ngumthetho kude kube ngu-2024 kwasekuqaleni.
Ulwazi olu kule webhusayithi lunokunceda abantu baphucule amathuba abo okufumana ulwalamano oluyimpumelelo, nolothando ngesondo. Siceba amacandelo amatsha ewebhusayithi kwisigaba sesibini sowama-2020. Ukuba ungathanda ukuba nasiphi na isihloko esichaphazelekayo songezwe, nceda usazise ngokuqhagamshelana nathi ku- info@rewardfoundation.org.
Isiseko somvuzo senza anganikeli unyango okanye anikeze iingcebiso zomthetho. Nangona kunjalo, senza iindlela zokungena ezihlangwini zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kubantu abasebenzise oko kube yingxaki. Injongo yethu kukunceda abantu abadala kunye nabachwephesha ukufikelela kubungqina kunye nenkxaso ukubavumela ukuba bathathe inyathelo elifanelekileyo.
I-intanethi ye-intanethi ikhululekile, kodwa abantwana bahlawula ixabiso
© 2021 ISICWANGCISO SOKWENZA IMALI: ZONKE AMALUNGELO OKHUSELEKILEYO
Isiseko soMvuzo, i-15 Calton Road, e-Edinburgh, i-EH8 8DL: Umbutho waseScotland oBumbeneyo oHlanganisiweyo we-SC044948